Dadka taxliiliya siyaasadda gobolka ayaa sheegaya in sanadii tagtay Mareykanka uu aad u jaray kaalmadii Falastiin, isaga oo isku dayaya inuu ka cadaaddiyo aqbalaadda qorshaha Trump, oo Falastiiniyiinta ay rumeysan yihiin inuusan u ogolaaneyn inay dal helaan.
Dhinaca kale, dowladda garabka midig ee ra’iisul wasaare Benjamin Netanyahu ayaa maamulka Falastiin saartay cunaqabateeno qarka u saaray xasarad dhaqaale.
Bishii Febraayo, Israel ayaa ku dhowaaqday inay 5% ka jarayso dakhliga dhan 190-ka milyan ee ah canshuuraha ay ka qaaddo badeecadaha laga soo dejiyo Daanta Galbeed iyo Marinka Gaza, taasi oo bil walba ay ku wareejiso maamulka Falastiin.
Lacagtan ayaa u dhiganta tan bil walba uu maamulka Falastiin siiyo ehellada dadka Israel ay xirto ee ku eedeysan weerarada ka dhanka Yahuudda. Dadkaas ayaa maamulka u arkaa geesiyaal mudan in qoysaskooda la taageero.
Bankiga Adduunka ayaa ka digaya in haddii aanu dhicin is-beddel deg deg ah, in dhinnaashaha miisaaniyadda maamulka Falastiin uu sanadkan gaari karo hal bilyan oo dollar.